xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: February 2011
တစ်နေ့တစ်နေ့ အနောက်မျှော် သမားများနှင့် ပြည်ပသြဇာခံ ပေးတာယူ ကျွေးတာစားပြီး အစာကျွေးတာတဲ့ သခင် အားရအောင် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း မကောင်းသတင်းတွေကို အပုပ်နံ့ တလှိုင်လှိုင်နဲ့ လေလှိုင်း ကြားမှာကော၊ ရုပ်မြင်သံကြား မှာကော၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာပါ အပြိုင်အဆိုင် အလုအယက် ပြောဆိုနေကြတာကို တွေ့နေ မြင်နေ ကြားနေရတာ ကြာလို့ သူတို့ပြောသမျှ တွေကို မရိုးနိုင်တဲ့ ဟာဒယများ သဖွယ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇာတ်တွေကို မြန်မာပြည်သူတွေက ကြားရဖန် များလာတော့ အစပိုင်းကတော့ ဟုတ်နိုးနိုး ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မိကြသော်လည်း တစ်စတစ်စဖြင့် လိမ်လုံးတွေမှန်း သိလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့မှာလည်း အဲလို မဟုတ်မဟတ် အတင်းအဖျင်းလေး တွေကို ပြောဆိုပေးနေမှသာ သနားသဖြင့် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့ ဒေါ်လာများ ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးတပ်လို့ တစ်မျိုး၊ ဇာတ်လမ်း အမျိုးမျိုးထွင်လို့ တစ်ဖုံ လေလှိုင်းကနေ သွေးဆောင် ဖျားယောင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ခုတလောတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မှာဖြစ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ မြန်မာ ပြည် မတူတူအောင် ဇွတ် ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီး ပြည်တွင်းမှာပါဆူပူမှု တွေ ဖြစ်လိုဖြစ်ညား ကြိုးစားနေကြပါသေးတယ်၊ လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှုးကြီးကဒါဖီကိုလဲ ရစရာမရှိအောင် ပြောာကဆိုကြ နဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အပေါင်းပါတွေ ကဇာတ်လိုက် ကဒါဖီက ဗီလိန်ဖြစ်အောင် ဇာတ်ဆင်နေရတာလဲအမောပါပဲ ..အဲဒီထဲက တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင် VOA နဲ့ RFA ထုတ်လွင့်ချက်တစ်ခုမှာ ကဒါဖီအာ အင်မတန် ချောမောလှပတဲ့ သက်တော်စောင့် လေးတွေနဲ့ သွားလာလေ့ရှိကြောင်း ပါရှိပါတယ်..ဒါနဲ့ နားထောင်ရတဲ့သူတွေအဖို့ မှာတော့ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ ဂျိန်းစဘွန်းကားတွေထဲကလို များသွားနေသလား ဆိုပြီး ထင်မိပါတယ်..ဒါကြောင့် ကဒါဖီရဲ့ အင်မတန်ချောမောလှပတဲ့ သက်တော်စောင့်တွေရဲ့ ပုံတွေကို ရှာကြည့် မိပါတယ် အင်တာနက်ဆိုတော့လဲ တွေ့တော့တာပေါ့ဗျာ...ကဲ VOA RFA တို့ရဲ့ အင်မတန်လှပတဲ့ ကဒါဖီ ရဲ့ သက်တော်စောင့်တွေကို ကြည့်ရအောင်.....
ဒီအင်မတန် ချောမောလှပတဲ့ သက်တော်စောင့်တွေကို ဗွီအိုအေ က ကျော်ဇံသာနဲ့ ပေးစား ထားလိုက်ရင်
တော်တော် ကောင်းမယ် မလှုပ်နိုင်အောင်လေ.....အသံပါ ပျောက်သွားအောင်.....
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန် အပါအ၀င် ဥရောပနှင့် အနောက် နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဟောင်း မစ္စတာ ရာဇာလီ အစ္စမေးလ် က တောင်းဆိုလိုက်သည်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သဘောမတူကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေ နှင့် စတင် ဖွံ့ဖြိုးကြီးပွားသင့်ပြီဟု ရာဇာလီ က ပြောဆို ကြောင်း၊ ယင်းတို့ကို Rediscovering Mediation in the 21st Century ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသော ညီလာခံတခုတွင် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယခုကဲ့သို့ပိတ်ဆို့မှုမျိုး အစတည်းက မဆောင်ရွက်ခဲ့ပါက မြန်မာ အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း ယခုလောက် သဘောထားတင်းမာမှုမျိုး တွေ့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းေ ပြာကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 4:00 AM
အထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များပေးမည်
အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အပေါ်မူ တည်၍ ဝင်ငွေခွန်၊ အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခ များအား နှစ်အလိုက် ကင်းလွတ် သက်သာခွင့်များပြုသွားမည်ဟု မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များ အရသိရသည်။အဆိုပါ ဥပဒေအရ ရင်းနှီး မြှုပ် နှံသူသည် ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား စတင် သည့်နေ့မှစ၍ ပထမ ၅ နှစ်အတွက် ပြည်ပ ရောင်း ရ ငွေအပေါ် ဝင်ငွေ ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဒုတိယ ၅ နှစ်အတွက် ပြည်ပ ရောင်းရငွေအပေါ် တည်ဆဲဥပဒေ အရ သတ်မှတ်သည့် ဝင်ငွေခွန် နှုန်းထား၏ ၅ဝ ရာ ခိုင်နှုန်း သက် သာခွင့်ရရှိနိုင်မည့်အပြင် တတိယ ၅ နှစ်အတွက် ပြည်ပတင်ပို့ရောင်း ချခြင်းမှ ရရှိသည့် မြတ်စွန်းငွေအား ပြန်လည်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံပါက ထိုငွေ အပေါ် သတ်မှတ် ထားသော ဝင်ငွေ ခွန်၏ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအား သက်သာ ခွင့်လျှောက် ထားနိုင် ကြောင်း သိရသည်။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက အခွန်ကင်း လွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်ကာလ များ ကုန်ဆုံးသွားသော်လည်း ပို့ ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးသည် ထုတ်လုပ် သည့်ပစ္စည်း တန်ဖိုးစုစုပေါင်းထက် အကြီးစားရင်း နှီး မြှုပ် နှံမှုလုပ်ငန်းများ တွင် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော် လွန်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အ လတ်စား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုလုပ်ငန်းများ တွင် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော် လွန်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အ သေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ တွင် ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော် လွန်နေပါက အဆိုပါနှစ်အတွက် ဝင် ငွေခွန်ကင်းလွတ်သက်သာခွင့် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထို့အပြင် အထူးစီးပွားရေးဇုန် မှ ထုတ်လုပ်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ အပေါ်
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:34 PM
ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်တွင် ရောက်ရှိနေသော သြစတေးလျနိုင်ငံသား Mr.Ross Stmiling Dunkley အား (၂၄၊၂၊၂ဝ၁၁)ရက်တွင် ရန်ကုန်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဟု သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် (၁)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားလမ်း၊ အမှတ်(၂၆) A ၊ဦးဒေးဗစ်ကရင် ပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်တွင် ယာယီနေထိုင်သူ သြစတေးလျ နိုင်ငံသား Mr.RossStmilingDunkley (အသက်၄၅)နှစ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (PP No. E 2084955 / 12.2.2008 MJ/ SNV) Myanmar Consol Dated MediaLtd. အမှုဆောင်၊ အရာရှိချုပ်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ သိမ်ကြီးဈေးအနီး တွေ့ရှိရသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်ရှိ မ....(၂၈)နှစ် တစ်ညလျှင် ကျပ် (၄ဝဝဝဝ)နှုန်းဖြင့် ညလုံးပေါက် ပျော်ပါးရန် ယင်းနေထိုင်ရာ အဆိုပါ အင်းယားလမ်းနေအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပျော်ပါးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပျော်ပါးပြီးနောက် မနက်ဖက်(၁၈၊၁၊၂ဝ၁၁) ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မ....မှ သူမ နေအိမ်သို့ပြန်လို၍ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း သဘောတူညီရရှိထားသည့် လိင်ပျော်ပါးဆက်ဆံခ ကျပ်(၄ဝဝဝဝ)အား တောင်းဆိုခဲ့ရာ ယင်းနိုင်ငံခြားသားမှ မပေးဘဲ၊ မ....အားထပ်မံ၍ ဆေးပြား(၁)ပြားရှူခဲ့ရပြီး အိပ်ပျော် သွားခဲ့ကြောင်း၊ သူမအိပ်ရာမှနိုးလာသောအခါ ယင်းနိုင်ငံခြားသား နေအိမ်တွင်မရှိသည့်အတွက် စားပွဲအတွင်းမှာ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း၍ ၄င်းသဘောတူညီမှုရရှိသည့် လိင်ဆက်ဆံပျော်ပါးခ ငွေကျပ်(၄ဝဝဝဝ)ကို ယူဆောင်၍ နေအိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း၊ ထိုနေ့ညပိုင်းတွင်
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:19 PM
အာရှ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုများကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး အရှိန်မြင့်လာမည်
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အဓိက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ထားသော တရုတ်၊ တောင်းကိုရီးယားနှင့် ထိုင်း နိုင်ငံတို့မှ အကြီးစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မူများကြောင်း လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာ့ စီးပွားရေးမှာ အရှိန်မြင့် တိုးတက် နေဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း နာမည်ကျော် Economist Intelligence Unit (EIU) ၏ ၂၀၁၁-၁၂ ခုနှစ် မြန်မာ စီးပွားရေး ခန့်မှန်းချက်အရ သိရသည်။ သို့ရာတွင် ရွေး ကောက် ပွဲကျင်းပ ခြင်း၊ လွှတ်တော် ခေါ်ယူခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်အချို့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသော နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲက မြန်မာ့ စီးပွားရေးအပေါ် ရုတ်ခြည်း ရိုက်ခတ်မှု ဖြစ်ပေါ်ဦးမည် မဟုတ် ကြောင်းနှင့် ယင်း တို့သည် ကမ္ဘာ့ အနောက်ခြမ်း နိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ထားရှိသော စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ကန့် သတ်မှုများ ကို လျော့ပါး စေဦးမည်မဟုတ် ကြောင်း EIU ၏ စီးပွားရေးအပိုင်း ခန့် မှန်းချက် တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (FDI) မှာ စံချိန်တင်တိုးတက်ခဲ့ပြီး ဓာတ် သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့နှင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အများဆုံးဖြစ်သည် ကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသောအချက် အလက်များအရ သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော နိုင်ငံ သယံဇာတ ရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အဓိကထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှု (Economic Growth) ကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ထိုမှရရှိသော ၀င်ငွေကို နိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးတည်သောကဏ္ဍများတွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင်အချို့က The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
“ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတွာမသတအ့ (တိုးတက် မှု) တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ မမူတည်ဘူး။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေး၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေး၊ ၀င်ငွေခွဲဝေဖြန့်ဖြူးရေးတို့ အပေါ်မှာလည်း ကြည့်သင့်တယ်။ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင် ၀င်လာတဲ့ဝင်ငွေကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးမှာ ပြန်မြှုပ်နှံရ မယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့ စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက သုံးသပ် ပြောကြားသည်။ တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရေနံ၊ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း များတွင် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထားဝယ်ဒေသ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မည့် ရေနက်ဆိပ် ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးစက်မှုဇုန် စီမံ ကိန်းသည်လည်း အခြေခံအဆောက် အဦနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း ထင်သာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ် တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၀န်ကြီးများရုံးအပါအ၀င် အအောက်အဦ ၅လုံး ရှေးမူမပျက် ပြုပြင်
ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ ဝန်ကြီးများ ရုံးအပါအဝင် ရှေးဟောင်းအဆောက် အအုံ ၅ လုံးအား ရှေးမူမပျက် ပြင် ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမြို့ရွာနှင့် အိုး အိမ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ များဖြစ် သော ဝန်ကြီးများရုံး (သိမ် ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်) မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း ရုံး (စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာ ရေး ဝန်ကြီး ဌာနရုံး(ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက် တံတားမြို့နယ်)၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနရုံး (မဟာဗန္ဓုလ လမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်)နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနရုံး (ဗိုလ် ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲ တန်းမြို့နယ်) တို့အား မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာများအသင်း တို့ ကြီးကြပ်၍ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီငါးခုမှ ပြုပြင် နေကြောင်း အိုး အိမ် ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။”
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 4:15 AM
အာဆီယံ ဒေသ အတွင်း ပညာ ရေး မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်း ကို ငါးနှစ်ကြာ စီစဉ် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ရာ မြန်မာ အပါအ၀င် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်း အရ ဇန်န၀ါရီ နှောင်းပိုင်း တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည့် ဆဋ္ဌ မ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပညာ ရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေး (6th Ased) တွင် အာဆီယ ဒေသ တွင်း နိုင်ငံ များ၏ ပညာရေး အဆင့်အ တန်း ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ စေရန် မဟာဗျူ ဟာ စီမံကိန်းများ ချမှတ် ဆောင်ရွက် ရေးကို အလေးထား ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြောင်း၊ WPE အမည်ရှိ ပညာရေး အဆင့်မြှင့် တင်မှု ငါးနှစ်ကြာ စီမံကိန်း ကို အဓိက အားဖြင့် လေးပိုင်း ခွဲ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ရာ ပညာရေး အ ဆင့် အတန်း မြှင့်တင်ရေး၊ ပညာရေး မှ တစ်ဆင့် ထွက်ပေါ် လာသည့် စွမ်း ဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး၊ တစ်သက် တာလုံး လေ့လာ ဆည်းပူးမှု (life long learning) နှင့် ပရော် ဖက်ရှင် နယ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု စသည် တို့ပါ ၀င်ကြောင်း၊
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမျိုး ဘယ်နေရာက စပျက်သလဲ သိချင်ရင် ဒီဇယားလေးကြည့်ပါ
ဦးကွီးထန် အား ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ၀န်ကြီးအမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်
ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဟုန်ငိုင်းက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ၀န်ကြီး အမည်စာရင်းကို တင်သွင်းခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ အမည်စာရင်း ထဲက ကန်ပက်လက် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ က ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ် ဦးကွီးထန်ဟာ အခြေခံ ဥပဒေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်မပြည့်တဲ့ အကြောင်း ချင်းအမျိုးသား ပါတီက ဦးဇိုဇမ်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးက ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ကန့်ကွက်လွှာကို ဒီကနေ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက လက်ခံပြီး စိစစ်တဲ့ အခါ ဦးကွီးထန်းဟာ အသက် ၃၅ နှစ်ပြည့်ဖို့ ၁၉ ရက် လိုနေတာကို တွေ့ရတဲ့ အတွက် ကန့်ကွက် ချက်ကိုလက်ခံပြီး ဦးကွီးထန်းရဲ့ အမည်စာရင်းကို လွှတ်တော်ကနေ ၀န်ကြီးစာရင်းက ပယ်ဖျက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး နှစ်ခုပေါင်းက အများစု ရရှိထားပေမယ့် အခု ကန့်ကွက်ချက်ကို အခြေခံ ဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လွှတ်တော် စည်းကမ်းများနဲ့ အညီ စိစစ်ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာကတော့ လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုမှုများ ရှိကြောင်းနှင့် ဦးကွီးထန် နေရာမှာ ဘယ်သူကို အစားထိုး ခန့်အပ်မယ်ဆိုတာ ကိုတော့ မသိရသေး ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ယခင်ခန့်အပ်ထားသော ၀န်ကြီးစာရင်း မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:21 PM
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါတီငယ်များ ပါဝင်
ဒီကနေ့မှာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးများမှာ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်များက အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပါဝင်မယ့် ၀န်ကြီး အမည်စာရင်းကို တင်ပြ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖွဲ့စည်းတဲ့ နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မှာ အရွေးခံရတဲ့ အခြားပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အနည်းအများ ကတော့ အဲဒီ ပါတီငယ်များ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်တဲ့ အင်အား အပေါ် မူတည်တဲ့ သဘော တွေ့ရ ပါတယ်။ ရရှိထားတဲ့ စာရင်းများ ကတော့
ဖလုံ - စဝေါ် ပါတီ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ
ကယားပြည်နယ် ကတော့ တိုင်းရင်းသား ပါတီများ အရွေး မခံရတဲ့ အတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီနဲ့ပဲ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ထား ပါတယ်။
၀န်ကြီး အမည်တွေလည်း ရပေမယ့် စာမျက်နှာကို ငှဲ့ပြီး မဖော်ပြ တော့ပါဘူး။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အပါအ၀င် ပါတီများက ၀န်ကြီးများဟာ ပြည်နယ်တွေမှာ ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်နယ် အစိုးရတွေမှာ ညွန့်ပေါင်း အစိုးရပုံစံ တိုင်းရင်းသား ပါတီငယ် တွေကိုပါ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းတဲ့ အချက်ရယ်၊ ၀န်ကြီးများဟာ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ရယ်ဟာ ပြည်နယ်များမှာ တိုင်းရင်းသား ရေးရာများ၊ မိမိဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးကို အကောင်အထည် ဖော်မှုများအတွက် အားတက် စရာ အချက်ပဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲလာသော ခမောက် ဒီဇိုင်းများနှင့် NLD ဖက်ရှင်
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:37 PM
ဒေါ်စုကြည် နှင့် NLD အဖွဲ့အား ဘလော့ဂါ လွဏ်းဆွေမှ အက်ဆစ် အမည်ခံ၍ ဝေဖန်စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်မှု အပေါ် ယခင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် လူ့ဘောင်သစ်ပါတီဥက္ကဌ ဟောင်း ယခု အမေရိက တွင် နေထိုင်သူ ထင်ကျော်ထက်မှ တုန့်ပြန် ပြောဆိုထားသော အသံဖိုင် ဖြစ်ပါသည် ။ ပြောဆိုမှု တစ်နေရာတွင် " ...အေး...ငါလဲမင်းလိုပဲ အရက်သမားတစ်ယောက်ပါပဲ...ဒါပေမဲ့..." ဟု ပါရှိပါသည် ။ နားဆင် ကြည့် ကြပါ ခင်ဗျား......